कुंडली भन्छन् वृष र कन्या को संघ कि - यो राशि को संकेत बीचमा बलियो को एक। र यो पाठ्यक्रम जीवन, समझ विभिन्न पक्षहरू प्रदर्शनमा एकता र, प्रेम मा खण्डमा।
व्यावहारिक र दृढ वृष
वृष - एक साँढेको। त्यसैले, पर्याप्त भाग्यवान् छन् मानिसहरू राशि यो चिन्ह, decisiveness र बल, व्यावहारिकता र दृढता द्वारा विशेषता अन्तर्गत जन्म हुन। वृष बादल मा टाउको छैन, उहाँले जो तिनीहरूलाई वित्तीय लाभ प्रतिज्ञा ठोस कार्यहरु संलग्न रुचि। यसको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न, उहाँले कुनै प्रयास र ऊर्जा बचाउनुभयो, सबै अवरोधहरू आफ्नो बाटो बाट हटाउँछ। भौतिक मान वृष धेरै लागि अर्थ। उहाँले सुविधा, सुविधा र स्थिरता रुचि। आफ्नो जीवनमा सबै वर्ष आउन लागि बाहिर योजना बनाए। तसर्थ, उहाँले आफ्नो मामला अपरिचित हस्तक्षेप गर्दा मन छैन। भावना वृष को अभिव्यक्ति बलियो छैन। सबै मा, त्यो स्थिरता, छैन भावना रुचि।
त्यसैले संघ मा "वृष-कन्या" अनुकूलता वर्ण मुख्यतया वृष को स्थिरता र व्यावहारिकता आधारित छ। र भर्जिन के?
छैन मिथक कन्या केही लागि - छ प्रेम को देवी र प्रजनन। निस्सन्देह, यो वृष भन्दा बढी भावनात्मक छ। र भावना भन्दा यद्यपि, उनको rationalism मा पनि धेरै। यो व्यावहारिक बौद्धिक, सही, लगनशील छ। नयाँ ज्ञान उनको चासो। कन्या मेहनती, सक्रिय छ र काम गर्न गर्नेहरूलाई लागि कुनै आदर छ carelessly बुझाउँछ। त्यो भन्दा राम्रो monotonous छैन शारीरिक श्रम, मानसिक र विश्लेषणात्मक अनुकूल छ। राम्रो खाना र सुन्दर लुगा लागि, सान्त्वना Indifferent। त्यसैले, यो पैसा बचत गर्न गाह्रो छ। विशेष गरी कुराहरू खरीद गर्दा मात्र गुणस्तर उत्पादन, हेरविचार लिएर कसरी उच्च मूल्य प्राप्त गर्न खोज्ने।
कन्या आफ्नो हितमा सोच्न, प्रियजनलाई हेरविचार गर्छन। यसलाई यहाँ हो र यसको व्यावहारिकता र प्रूडेंस पालना गर्नुहोस्। र अग्रानुक्रम मा उनको हातले "वृष-कन्या" संकेत अनुकूलता हेरचाह र गतिविधि आधारित छ।
दुई संकेत को संघ को बल
प्रेम वृष र कन्या आवेग, रोमान्स वा सम्बन्ध डाह कुनै फरक गर्मी। तिनीहरूलाई लागि, प्रेम र विवाह - थप आवश्यक समझ, सुरिलो सम्बन्ध साझा चासो नबुझाउन छ।
सामान्यतया, किनभने यसको ठूलो गतिविधि र परिवारको लागि जिम्मेवार जन्मबाट प्राप्त अर्थमा यस्तो विवाह भर्जिन मा सक्षम मुख्य व्यक्ति आफ्नो मात्र होइन ऊर्जा, तर पनि ऊर्जा साझेदार harnessed गर्न बन्नेछ।
वृष, बारी मा, आज्ञा पालन गर्न सहमत छ। यो संग मुख्य कुरा राम्रो मा गर्न आवश्यक छ, र त्यो परिवारको लागि पैसा कमाउन को मुख्य बोझ लिन, र नियन्त्रण खर्च।
यो को संकेत कि बाहिर जान्छ कन्या प्रेम र विवाह अनुकूलता र वृष लगभग पूरा हुन सक्छ। कसरी पूर्ण? जहाँ तपाईं सेक्स कन्या र वृष जस्ता कारक को एक निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्।
केटी वृष, कन्या मान्छे - अनुकूलता
वृष को महिला को यो संघ मा लचिलो हुन सक्ने क्षमता र कौशलता, को भर्जिन को मन को राज्य मा ट्युन गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यो प्राप्त छ भने, त्यसपछि विवाह सफल हुनेछ।
कुनै पनि अवस्थामा, केटी वृष मनमा लिएको हुँदैन गर्न आफ्नो साझेदार को मूड swings, कहिलेकाहीं त्यहाँ दुःखी वा melancholy हुन कुनै कारण जस्तो देखिन्छ। त्यसको विपरीत, यो हुनुपर्छ र अधिक महत्वपूर्ण कुरा, एक परिवार सान्त्वना र न्यानो वातावरण र मदत मानिस Deva फेंक शङ्का र फिक्री सरलता सिर्जना गर्न, यो चाहनालाई dispel गर्न सक्षम। त्यसपछि उहाँले राख्न आफ्नो चूल्हा न्यानो पहाड सार्न सक्षम हुनेछ।
सिद्ध अनुकूलता कन्या र वृष, महिला किनभने दुई भाग्य मा भरोसा छैन बाहिर जान्छ। तिनीहरूले उनको देखि कृपा आशा छैन, र आफ्नो काम समृद्धि हासिल। दुवै एक गम्भीर सम्बन्ध लागि प्रयास र एक परिवार घर को आराम र न्यानोपन मूल्यांकन गर्छौं।
पुरुष वृष, कन्या महिला - अनुकूलता
यस्तो एक जोडी को विवाह पनि, बलियो साधारण मामिलामा, ध्यान र हेरविचार, परिवार अनुरूप पूर्ण हुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यहाँ मानिस वृष उनको सल्लाह सुनेर गर्दा, दोस्रो आधा आदर र समझ देखाउन सक्षम हुनुपर्छ। उहाँले परिवारमा अग्रणी भूमिका वहन गर्नेछ, तर यसको कार्य अझै पनि कुमारी निर्देशन गर्न। र यो कहिलेकाहीं तिनीहरूले उनको परेशान पनि भने, महत्वहीन र अनावश्यक सानो कुरा मा बास गर्ने प्रयास गर्न, र मानिसहरूको शान्त सुविधाहरू लिन आवश्यक छ।
साझेदार को क्षमता चाँडै लाभ र प्रत्येक अन्य को बेफाइदा आकलन र यो के को लागि आफ्नो जोडीको लिन - यो विवाहमा महत्वपूर्ण छ। तिनीहरूले पूर्ण प्रत्येक अन्य बुझ्न अघि लामो छैन। एक अनुकूलता राशि संकेत "कन्या वृष +" वर्षौंदेखि मात्र तीव्र हुनेछ।
तपाईं समस्या अनुभव भने
शायद सम्बन्धमा समस्या गर्दैन यस्तो जोडे, को दुनिया मा छैन। वृष र कन्या - कुनै अपवाद छ। तर कुनै पनि कठिनाइहरु साझेदार आपसमा प्रयोग प्राप्त र आपसी समझ र आदर imbued गर्दा, विशेष गरी समय खण्डमा संग हटाउन सकिन्छ।
को वृष को भर्जिन को नाजुक भावनात्मक संरचना बुझ्न प्रयास गर्नेछ भने एक जोडी मा "कन्या र वृष 'प्रेम अनुकूलता आदर्श हुनेछ। तिनीहरूलाई व्यक्त गर्न सक्षम छ भने एक, स्नेह उनको प्रदर्शित देखि माग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा कन्या द्रुत स्वभावका, रिस, निर्दयी हुन सक्छ। यो पाठ्यक्रम, पति टाढा प्राप्त गर्न चाहन्छ, जो, दया र संवेदनशीलता, एक प्रकटीकरण आवश्यक छ। र प्राप्त भएको यो दोस्रो हावा खुल्छ र यो लाग्न सक्छ कि सबै प्राप्त, विभिन्न आँखा मार्फत संसारको हेर्न, सुरु हुन्छ। बारी मा, वृष को भर्जिन भावनात्मक शुल्क प्राप्त गर्दछ। यो उहाँको लागि आनन्द र प्रेरणा को स्रोत हो। उनको छेउमा, उहाँले रमाइलो र आराम गर्न सहमत, त्यसैले तपाईं नयाँ जोस काम गर्न प्राप्त गर्नुहोस्। यसलाई कन्या पूर्ण वृष को रचनात्मक क्षमता बढाउने सक्षम।
साना कुराहरू बावजुद
कहिलेकाहीं एक महिला वृष अत्यधिक बचत रीस उठाउनु, तर पनि सावधान कन्या गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, क्षतिपूर्ति रूपमा, त्यो आफ्नो मेहनत, इमानदारी र समर्पण गर्न आदर भुक्तानी गर्न सक्षम छ। तर पुरुष वृष कहिलेकाहीं लापरवाहीसंग र पनि लापरवाह। तिनीहरूले प्राप्त को गम्भीर व्यापार अडिएको छन् , जीविका त्यसैले यसलाई अनावश्यक nadraivat जूता चमक एउटा भ्कुन्डाउने साधन र शर्ट मा फांसी, खरानी वा crumbs हटाउन, ध्यान दिएर comb गर्न समय लिन ठान्नुहुन्छ। कन्या वृष आफ्नो poise र हल्ला quarrels बिना संघर्ष समाधान गर्न सक्ने क्षमता मोल छ।
प्रत्येक अन्य पूरक संघर्ष र quarrels परहेज, कन्या र वृष प्रेम अनुकूलता जसबाट आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउने, पूर्ण पाउन सक्नुहुन्छ, र खुसीसाथ सँगै जीवन बिताउन।
पूर्ण समझ हुन सक्छ
यो जोडी को अनुरूप बुझ्न छ। उनीहरू त्यहाँ साधारण योजना, चासो र चाहना धेरै छ किनभने प्रत्येक अन्य कुराकानी गर्न सजिलो हुन्छ। समय को खण्ड बलियो संग आपसी समझ र भावना तीव्र। प्रेम, यदि भावुक र शान्त छैन, सन्तुलित, तिनीहरूले एक्लै थिए भन्दा तिनीहरूलाई सँगै बलियो बनाउने। मात्र अर्को आपसमा तिनीहरू पूर्ण सुरक्षा, भविष्यमा विश्वास र विश्वसनीय काँध मात्र होइन पत्नी, तर पनि मित्र लाग्छ।
कन्या र वृष प्रेम अनुकूलता सिद्ध प्राप्त। यो संयोजन एक सुरिलो विवाह र खुसी जीवन सँगै लागि अनुकूल छ। कन्या र वृष एक जीवनकालमा असल भाग्य र जो, सँगै गर्दै विजयी र चाँडै छोटकरीमा आनन्द marred कि समस्या भूल उपलब्धिहरू, मा आनन्द, सँगै खर्च गर्न सक्षम छन्। आखिर, त्यहाँ एउटा अपरिहार्य आवश्यक पूर्ण आपसी समझ पुग्यो जसलाई एउटा मानिस तपाईंलाई छ भने, कुनै पनि कठिनाइ सजिलै हटाउन छन्, र सबै भन्दा जटिल द्वन्द्व मुद्दाहरू आपसी सम्झौता गरेर समाधान गर्दै हुनुहुन्छ।
अनुकूलता वृष र कन्या
ड्रागन र बाख्रा: अनुकूलता प्रेम र विवाह
2010: जो पशु यसको प्रतीक हो? सुविधा र अनुकूलता
Razluchnitsy र अपराधीहरूलाई: को राशि को सबै भन्दा खतरनाक संकेत
Kos विमानस्थल "Hippocrates" अतिथि पर्खिरहेको
यात्रा को प्रेमी माइकल कोजोखोव। रिपोर्टर, पत्रकारको प्रख्यात, मिचेल कोजोखोव
मल्टीवार्क मा चिकन देखि Satsivi - स्वादिष्ट र धेरै सुगन्धित जर्जियाई डिश
पोलीट्रीन बल र शिल्प सहित: कार्यशालाओं, विचार र वर्णन। फोम बलमा देखि हिममानब